Gentoo-Source: Otu esi ewu kernel gi na anwu anaghi anwa anwa | NwetaLeta | ChrisADR | Site na Linux
ChrisADR | | Nkesa, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ọfọn, nke a bụ otu n'ime isi ihe ndị ahụ nke m na-enweghị ike ileghara anya tupu ịmalite ntuziaka nwụnye ndị mmadụ 🙂 Amaara m na ọtụtụ ga-ele anya na post a, ma nwee mwute maka ime ka ị chere, mana m tụlekwara na anaghị m akọwa nke ọma. against my Gentoo user status 😛 Enweghị oge ọzọ, ka anyị bido.
1 Kedu ihe bụ kernel?
2 Kedu ka ị mere na Gentoo?
3 Enwerem koodu, ugbua gini?
5 CLI na GUI:
5.1 genkernel –xconfig niile
5.2 genkernel –qconfig niile
5.3 genkernel –nconfig niile
5.4 genkernel –menuconfig niile (ọkacha mmasị m)
6 Akwa, mana olee otu m si achọta ihe?
7 Kedu ihe ịkwaga na gịnị abụghị?
7.1 Ndabara na-arụ ọrụ
7.2 Ọ bụrụ na ị maghị ya, emegharịla ya
7.3 Nnukwu ibu dị na ndị ọkwọ ụgbọala
7.4 Lelee nke ọma na ị na-achịkọta ihe dị mkpa na *
8 Na nchịkọta:
Kedu ihe bụ kernel?
Kernel bụ akụkụ Linux nke ọma na nkesa ọ bụla, ọ bụ mmemme na-enye anyị ohere iji kọmpụta anyị na-arụ na kọmpụta ọ bụla na kọmputa anyị. Onye kere ya, bụ Linus Torvalds, kpebiri ịhapụ ya n'okpuru ikikere GPL ma nye ya ekele, yana ọrụ GNU, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ nkesa na ụdị ịhọrọ. Edere ya nke oma na C, ya na otutu nzuko ebe a na ebe ahu, ma taata, obu oru ngo ngwanrọ kasịnụ, ya na otutu puku ndi mmepe na aru oru na ya, ma ndi okacha amara na ndi okacha amara, ma jigide akara na-aga n'ihu na-eto eto ruo ọtụtụ afọ ugbu a. Nke a bụ kernel gọọmentị peeji ya mere ha nwere ike ile anya nke ọma.
Kedu ka ị mere na Gentoo?
Ọfọn, dịka a tụrụ anya na Gentoo, enwere ọtụtụ nhọrọ kernel, ana m ahapụ ebe a obere ndepụta ka ị wee hụ nke ọma ihe m na-ekwu:
isi-iyi: Kernel 4.12 nwere akara pụrụ iche maka Linux Linux.
git-isi mmalite: Kernel ebudatara na ebe nchekwa Linus Git.
vanilla-isi mmalite: Full kernel enweghị ihe ọ bụla patch.
xbox-isi mmalite: Kernel zuru ezu maka Xbox Linux.
zen-isi mmalite: Ndụ ndụ nke Zen
Maka ndepụta zuru ezu m na-ahapụrụ gị njikọ wiki ebe ị nwere ike ịchọta kernels niile Gentoo na-ekwusi ike na nchekwa ha. (ihe niile na - agwụ -nweta)
Enwerem koodu, ugbua gini?
Ọfọn, n'adịghị ka nchịkọta Linux ndị ọzọ niile, kernel OBU Emelitere ya, arụnyere ya. Nke a na-enye anyị ohere ịnwe ọtụtụ kernels na sistemụ anyị n'otu oge, n'ezie, ịnwere ike ịgba ọsọ naanị otu n'otu oge. Iji chịkọta ya, ọ dị mkpa iji ngwaọrụ ndị anyị kwurula na mbụ na post. Ma, ebe ọ bụ na Gentoo obodo na-eme 80% nke ọrụ gị, ka anyị mee ya n'ụzọ kachasị mfe 😉
Ka m mee ka ị mara ngwa ọrụ dị mma 🙂 a na-akpọ ya genkernel-na-esote, ị ga-ahụ ya na nchekwa ndị Gentoo.
Ndepụta nhọrọ dị ọbụna karị, mana ndị a bụ ụfọdụ nhọrọ m kachasị amasị m. Otu n'ime ihe kachasị mkpa mgbe ị na-etinye Gentoo bụ Mbido nke kernel gị, nke a ga - enyere gị aka inweta ọtụtụ ihe na kọmpụta gị ma n'otu oge ahụ zere ihe niile ahụ buru ibu nke ọtụtụ kernels chịkọtara.
CLI na GUI:
Dị ka ị nwere ike ịtụ anya, kernel nhazi nwekwara ụzọ dị iche iche esi eme nhọrọ over ebe niile, dị egwu. Lee ụfọdụ foto ihe nhọrọ ahụ dị:
genkernel –xconfig niile
genkernel –qconfig niile
genkernel –nconfig niile
genkernel –menuconfig niile (ọkacha mmasị m)
Akwa, mana olee otu m si achọta ihe?
Ajụjụ amamihe dị na ya nke onye ọ bụla na-ajụ onwe ya ugbu a. Y’oburu n’achoghi icho uzo n’ahịrị, cheta na «/ » na "? » Ha bụ ndị enyi gị na ozi a. Ma ebe ọ bụ na ọ ka mma ịhụ karịa ịgụ, m na-egosi gị ihe m na-ekwu site na nke a.
Ka e were ya na anyị chọrọ ịlele nhazi anyị, kernel ahụ na-akwado intel na amd, nke anyị bụ Intel. Ọ bụrụ na ị pịa / (ịsụ na ịgba ọhịa), ọ ga-ewe anyị na ndị na-esonụ menu:
Great, ugbu a, ka anyị hụ anwansi na-arụ ọrụ 🙂
Akwa! Ugbu a, anyị nwere ndepụta ndọpụta yana ozi niile anyị nwere ike ịchọ, ahaaka aha nke modulu ahụ, ụzọ ya, ụdị uru ya, wdg. Ma ugbu a ajụjụ a ... kedu ka m ga-esi ruo ebe ahụ? Dịkwa nnọọ mfe! ọ bụrụ na anyị ele anya n'akụkụ aka ekpe, anyị nwere ọnụọgụ n'ime akụrụngwa. Pịa otu n'ime ha, ị ga-ahụ anwansi na-eme ọzọ.
Ngwa ngwa ka nke a! Anyị anọworị ebe anyị chọrọ. Mana ... chere, a gwara m gị nke ahụ ? bu enyi gi, i chetara? Ka anyị hụ ihe ga-eme ma ọ bụrụ na anyị pịa? ugbu a.
Nkọwa nkenke nke modul ahụ, nhọrọ ya na ịdabere 🙂 niile na mkpịsị aka gị. Ozugbo ịchisịrị ọchụchọ gị, ị nwere ike ịpụ. Nwere ike chọpụta na ụlọ elu ahụ agaghachila na akara Search (intel), ọ bụrụ na ịpụpụ ọzọ, ọ ga-eweghachi gị na menu isi ebe ị nwere ike ịmalite nyocha ọhụrụ.
Kedu ihe ịkwaga na gịnị abụghị?
N'oge a, ị ga-enwerịrị mmetụta zuru oke, n'ihi na ị nweta ihe mmadụ ole na ole na-eme na ndụ ha, chịkọta kernel. Ndeewonu! Ma ugbu a, ajụjụ na-ebilite… gịnị ka m kwesịrị gbanwee? Na enyi m, bụ ihe naanị gị nwere ike ịchọpụta, mana m nwere ike ịnye gị ndụmọdụ ole na ole ga-enyere m aka nke ukwuu:
Ndabara na-arụ ọrụ
Dị ka mmemme niile, a haziri Linux ịrụ ọrụ na ntọala ndabara. Nke a na-ekwe nkwa na ọbụlagodi na ịchọghị ịhazi ihe ọ bụla, mgbe ị na-achịkọta ị ga-enwe kernel na-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị maghị ya, emegharịla ya
Nke a bụ ihe ọ ga-abụ na ihe kacha dị egwu ga-eleghara anya. Ọ dị mma ịnwe ike ịmegharị ngwa ngwa site na nhọrọ ahụ, mana ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmara etu igwe gị si eche, ịgụ nhọrọ ọ bụla bụ ụzọ dị mma iji jiri echiche a mee ihe. Icheta oge niile ihe ị gbanwere ma na-achọ ma ọ bụ na-atụnyere ihe nchọgharị ka akwadoro.
Nnukwu ibu dị na ndị ọkwọ ụgbọala
Ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala na-ebufe na ndabara, nke a na-eme kernel ka ọ dị arọ. Dịka ọmụmaatụ, naanị maka kaadị netwọkụ, enwere ihe dị ka ndị ọkwọ ụgbọ ala 10 dị na kernel, na ọtụtụ nkesa na-achịkọta 10 niile, ma ọ bụ karịa, mana n'eziokwu ị ga-eji otu na kọmputa gị (rịba ama na Wi-Fi enwere ngalaba ọzọ dị iche). Ọ bụrụ n'ịchọrọ iwelata kernel gị nke ọma, ihe mbụ ị ga-eme bụ ebe ahụ. Maka nke a, ezigbo ndị enyi gị ga-abụ Nnenna y Google. Na nke a, ịnwere ike ịnwe echiche doro anya nke ihe sistemu gị nwere ma hapụ naanị ndị ọkwọ ụgbọ ala dị mkpa iji mee ka ọ rụọ ọrụ. Ọmụmaatụ m na-ahapụ m lspci mmepụta:
Site na nke a enwere m ike ịnweta ozi dị oke mkpa doro anya, dịka onye na-ahụ maka netwọ m, onye njikwa Wi-Fi, draịvụ SATA m, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-enyere m aka belata ịdị arọ nke kernel m.
Lelee nke ọma na ị na-achịkọta ihe dị mkpa na *
Daalụ ọzọ na onye anyị na ya njọd, isi okwu dị mkpa m chefuru ikwu banyere n'ihi mmetụta the
Ekwesiri ighota na enwere otutu nkpuru nkpuru nke kwesiri itinye n'ime ya (*), ma enwere ike idozi ndi ozo dika modulu (M). Echetara m kernel m chịkọtara mbụ, na-achọ ịhapụ nkwado nke mgbọrọgwụ m dị ka usoro, mgbe ndụ ọ ga - arụ ọrụ?!?! xD ...
N'ezie, ọ bụrụ na mkpụrụ ndụ gị chọrọ ihe iji rụọ ọrụ, ọ gaghị abụ a modulu. Site na ndabara, modulu na-ebu ibu mgbe kernel emechara usoro mmalite niile. Ọ bụrụ na kernel gị chọrọ ihe ịmalite, ọ ka mma ijikọta ya kama dị ka usoro Nke na-ewetara anyị isi okwu ọzọ "?" bụ enyi anyị 😉
Ugbua ugbua ị banyela n'ime kernel ụwa ntakịrị, echere m na m ahụlarị ọhụụ ọzọ dị mkpa iji nwee ike iwepụta ntuziaka nwụnye Gentoo ~ 20-nzọụkwụ step mana ọ bụrụ na achọta ihe ọ bụla ọzọ ebe ahụ, m ga-anwa ịkọwa tupu nke ahụ naanị tọpụ n'ikuku.
Ekele m na m ahapụ gị ndị ọzọ nke post m ma ọ bụrụ na ị na-atụ uche ha:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Uzo di iche iche: Otu esi eme ka nkpuru osisi gi ghara idi anwu anwa
Ezigbo mma post dị ka mgbe niile.
Na nke a bụ ọka m: maka kernel anyị iji rụọ ọrụ nke ọma, anyị ga-emegharị ya na ngwaike anyị, yabụ anyị ga-ama ya nke ọma. Maka ebumnuche a, anyị ga-ahụ 'lspci' na 'lsusb' dị ka isi ihe ọmụma. Ma oburu na anyi choro ihe kariri, ana m ahapuru gi peeji a, nke mere ka m puta na nsogbu karia otu oge https://kmuto.jp/debian/hcl/
Juan Pablo Garcia Rivera onye nhazi ihe oyiyi dijo
Kpọmkwem njord, ya mere, post a agaghị enwe nkọwa zuru ezu ma ọ bụrụ na ị maghị HW ị nwere, dịka nkwanye ọ dị mkpa ịga leta peeji nke onye nrụpụta yana ịgụ site na enyemaka nke kernel n'onwe ya banyere modulu ndị nwere ike ijere gị ozi, n'okpuru ndị a M agbakwunyerela njikọ na blọọgụ m ebe ị nwere ike ibudata faịlụ nhazi dị elu maka Hp Pavilion 23-p132la, enwere m olileanya na ọ ga-enye aka ma nwee olile anya na ọtụtụ ndị ọrụ na-ekerịta faịlụ ndị a na ngwa dị iche na HW.
Zaghachi Juan Pablo Garcia Rivera
Ndewo enyi, ahụrụ m isiokwu gị n'anya, ọ bụ ya mere m jiri tinye aha na ibe gị ogologo oge. M na-ekerịta vidiyo n'ime amaghị nke ịbanye na gentoo, mana enwere m obi ụtọ ịgbaso usoro isiokwu a.
Ekele na weebụsaịtị gị.
Naanị m na - arịọ gị amara: Etinyela ihe oyiyi na * .bmp, ebe ọ bụ na njikọ m dị obere nwayọ na ihe nchọgharị m na - ewe ogologo oge iji buru ibu oyiyi, yabụ ana m akwado ka ị gbanwee ihe onyonyo ahụ na * .png ma ọ bụ * .jpg.
Oops, nwute 🙂 mana daalụ maka ịkọwapụta, echeghị m maka ya, agbanyeghị na enwere mmetụ na Gentoo, amabeghị m isi isiokwu a nke blọọgụ nke ọma 😛 mana site ugbu a gaa n'ihu, m ga-agbanwe usoro a, m na-ewere naanị Shutter na M na-ebugo ha ozugbo, ka m ghara ime nnukwu ibu na otu m, mana m ga-atụlekwa ibu maka gị 😉 ekele na ekele gị nke ukwuu maka okwu gị, ha na-agba m ume ka m gaa n'ihu ide, Enwere m onyinye izu ụka 🙂
Achọpụtara m usoro isiokwu ị na-ede na-atọ m ụtọ nke ukwuu. Enwetalala m Gentoo dị ka ihe ntụrụndụ, ma na-enwekarị nsogbu na otu puku na otu, anaghị achịkwa ọtụtụ n'ime ihe m mere na ịghọgbu ihe iji pụọ na nsogbu. N'agbanyeghị nke ahụ, agbalịrị m ịhụ n'ọtụtụ mbọ m na nke a ga-abụ nkesa m ga-anọ na ya ma ọ bụrụ na m jisie ike ịnwe nrụnye kachasị mma ma nwekwaa ya. Ugbu a, m nọ na Fedora, ọ bụ ezie na anaghị m ekwenye Fedorian. Adị m ka ọ dị ka mascot Gentoo: «Larry ehi ahụ bụ ntakịrị iwe
na ugbu a ala Linux nkesa…
… Ruo mgbe m nwara Gentoo Linux. »
M ga - ahapụrụ gị ndụmọdụ ụfọdụ maka ndụmọdụ ọdịnihu gị, ọ bụrụ na ọ ga - atọ gị ụtọ imetụ ha aka ma ọ na - enweta obi abụọ m:
- Gentoo nwere nchekwa zuru oke, mana ọbụlagodi enwere nkọwapụta nke na-anọghị na ya; ọ bụrụ na ọ bụ ụfọdụ mmemme sayensị ma ọ bụ ihe ndị ọzọ akọwapụtara nke ọma. Ọ ga-abụ ihe na-adọrọ mmasị ịmara n'onwe anyị otu anyị nwere ike isi wụnye ihe anyị na-enweghị ike ịchọta na ebe nchekwa gị. Amaara m ma aghọtaghị nke ọma ịdị adị nke "ekpuchi". Debian nwere usoro gọọmentị na akwadoro iji wụnye ngwanrọ nke na-adịghị na nchekwa ha, enwere ihe yiri ya na Gentoo? Kedu ihe ga-abụ ụzọ kachasị mma iji wụnye na-enweghị kpochapụwo ./configure && make && make install?
- N'ikpeazụ, nnukwu nsogbu m mgbe ị na-etinye Gentoo na-abịa mgbe mbido mbụ nke m na-eche ihu njikwa na-enweghị ịhazi netwọk ahụ. Ọ bụ isi nkụda mmụọ, ebe ọ bụ na aghọtachaghị m otu esi esi Wi-Fi elu. Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịmara usoro nkuzi nke bụ usoro ziri ezi ịme ya yana ịnwee ike ịga n'ihu ntinye nke desktọọpụ na ọrụ ndị ọzọ. Na nrụnye m gara aga ihe m mere bụ ịwụnye Gnome na ihe niile site na chroot nke ntọala ntọala; ndozi, bia.
Ọ dịghị ihe ọzọ. Ekele dịrị gị na DesdeLinux maka isiokwu ndị a gbasara nkesa pere mpe nke na-atọkarị ụtọ.
Site na ụzọ m na-emejọbu ntakịrị nke gị: Ana m agụkarị banyere Gentoo site na ndị ọkachamara IT dị ka gị, ndị mmemme, sistemụ ma ọ bụ ndị injinia netwọkụ, wdg. Ma ahụtụbeghị m echiche sitere n'aka onye ọrụ njedebe iji distro; Bụ Gentoo a ezi echiche maka na ọgwụgwụ onye ọrụ, onye, ​​Amaghị m, bụ a photographer, ma ọ bụ na-amụ gburugburu ebe obibi sayensị ma ọ bụ mechatronics, ma ọ bụ nanị chọrọ Steam,…? (Echere m na ị ghọtara ihe m na-ekwu)
Daalụ ChrisADR na ekele gị
Edere gị arịrịọ gị 🙂 ugbu a emechara m dezie ntuziaka ntinye akwụkwọ, ị ga-enye m ụbọchị ole na ole n'ihi na enwere m asambodo asambodo na Satọde a (LFSC nke Linux Foundation) na m ga-akwadebe maka ụbọchị ndị a fọdụrụ. Banyere overlays, ha dị ka AUR na Arch, ebe ndị ọrụ nwere ike ịmepụta ebuild nke ha, isiokwu ọzọ na-echere maka ọkwa zuru oke. N'otu oge ahụ enwekwara usoro nrụnye nkịtị, nke dị iche iche dịka enwere ájá n'ụsọ osimiri ... mana nke ahụ maka ọkwa ọzọ 😉 Banyere ndị ọrụ, na Gentoo enwere ntakịrị ihe niile, enwere ndị gamer (oge ochie, n'ihi na abụghị m 100% ma ọ bụrụ na Steam nọ na nchekwa anyị), enwere ndị na-agba ọsọ nwere ihe mgbanye aka ha nke Gentoo maka Pentesting, Pentoo ... Amaara m ụfọdụ ndị ọrụ ibe anyị n'obodo ndị na-abụghịcha ndị injinia, ma ọ bụ ndị mgbakọ na mwepụ, na Ọfọn, ha na-eme nke ọma 🙂 Enwekwara ndị sayensị na ndị ọrụ ngo na akụrụngwa, ma ọ bụ ọbụna okpukperechi ... na nkenke, enwere ntakịrị ihe niile na Gentoo, maka ihe niile masịrị gị, ebe ọ bụ na nkà ihe ọmụma na-enye anyị ohere ịhọrọ 🙂 n'oge na-adịghị anya, m ga-ede edemede ọzọ ma m ga-anwa kpuchie obi abụọ gị 🙂 Daalụ
. Dị ka ezigbo onye ọrụ Gentoo nke m bụ, ka oge na-aga ị ga-achọpụta, ọtụtụ oge anyị ga-eche "site na igbe ahụ" ma ọ bụrụ na nke ahụ gụnyere otu ma ọ bụ nkà ọzọ n'ebe ahụ, mgbe ahụ great will ga-ahụ ya na ntuziaka nwụnye Gentoo m nke ahu gha aputa n'oge na adighi anya 🙂
Kedu maka onye mmekọ ... na-akwado mmegharị gị ... nke a bụ nhazi ... maka "Hp Pavilion 23-p132la + AMD A10-7800 Radeon R7"
Ana m enyocha nhazi nhazi gọvanọ ugbu a welcome enyemaka niile dị na ya welcome
Ọmarịcha! Ana m ekele gị nke ukwuu maka ịkọkọrịta ahụmịhe gị na obodo ndị ọzọ, na-enweghị obi abụọ post m abụghị 100% ziri ezi ma ọ bụ zuru oke, n'ihi na echere m na n'ọnọdụ ahụ ọ ka mma ide akwụkwọ zuru oke 😛 mana opekata mpe na nke a ga-akpọte mmụba nke ndị ọzọ nke otu wee si otú a nwee ike ịhapụ ụfọdụ ihe omume ụlọ akwụkwọ maka nke ọ bụla n'oge ha na-enweghị ego 😉 Ekele na ekele
You na-ahụ nnukwu ọdịiche dị n’ịchịkọta kernel ma ọ bụ mkpụrụ ọnụọgụ abụọ?
Iji maa atụ na mkpuchi, enwere akwa ebu:
Iji nye gị ntakịrị echiche, ndị enyi anyị na Linux Site na Scratch nwere ikwu ihe gbasara iwu ụlọ.
«Anyị arụnyere na usoro nke zuru ezu iji na-agba ọsọ Apache sava weebụ; ngụkọta ohere ojiji dị ihe dịka 8 MB. N'ihu n'ihu, enwere ike iweta 5 MB ma ọ bụ obere. »
A sụgharịrị n'asụsụ Spanish na-ekwu na ha jisiri ike na-agba ọsọ ihe nkesa Apache na naanị 8MB, nke nwere ike ịbụ 5MB. Ọtụtụ ohere ahụ bụ kernel naanị, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ sistemụ nke na-eme otu ihe kpọmkwem, ma ọ bụ jiri naanị ngwaike gị. 10M kernel na-enye gị ohere ịnweta RAM fọdụrụnụ (cheta na kernel na-agba na RAM oge niile ị na-eji kọmputa gị). Na mgbakwunye na nchekwa na uru ndị ọzọ nke ịnwe kernel omenala, ị nwere ike ịhụ mmụba dị ịrịba ama na ohere. Nke nwere ike imetụta ọsọ yana.
M ebudatara ogbo 3 n'ime folda ma mgbe m na-emekọrịta ihe m gbalịrị ịpụta-isi mmalite ma usoro a na-ewe ọtụtụ awa? mgbe ọkara otu awa, ozi dị ka
Ọ ga - agbagha nke ukwuu ma nọrọ otu awa ahụ ma ọ bụ na enwere nhọrọ iji mee ya ngwa ngwa? ebe ọ bụ na nke a pụta naanị na-ahapụ isi mmalite ka ọ chịkọta ha na nhọrọ.
Ndewo Fernan, ọ dịbeghị mgbe m nwara ịwụnye nhazi ogwe aka. Aghọtara m na dabere na mbipute nke RPi (ọ bụrụ na ị na-eji otu) USB na ịntanetị jikọtara, yabụ oge nbudata nwere ike ịdị ogologo karịa ka ọ dị. (Ọbụna na laptọọpụ i7 m kernel oge nbudata na ebe nchekwa dị ihe dị ka 4 ruo 5 nkeji)
Amaghị m etu ị siri mara isiokwu ahụ, mana ị nwere ike ikpokọta ihe niile na laptọọpụ dị ike karị ma nyefee ya na ngwaọrụ ikpeazụ, nke ga-enyere ọtụtụ aka na mbipụta oge.